Global Voices teny Malagasy » Nakaton’ny Manampahefana Ao Bangladesh Ny Trano Iasan’ny Mpivaro-tena Nijoro Efa Ho 200 Taona Izao, Mpivaro-tena An-jatony No Voaraoka Tamin’izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2014 20:17 GMT 1	 · Mpanoratra পান্থ রহমান রেজা (Pantha) Nandika (en) i Rezwan, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsimo, Bangladesh, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Voina, Zon'olombelona
Mpivaro-tena maherin'ny 759 no voaraoka vokatr'izany. Nampandrenesina ora vitsy mialoha fotsiny ireo mponina, nanohitra izany ireo fikambanan'ny zon'olombelona. Nilaza ny pejy Facebook natokana hiresahana momba ny vehivavy “Women Chapter ” fa ahiana ny fiainan'ireo mpivaro-tena voaraoka ary miaina ao anaty tontolo mety ahitan-doza izy ireo.
Vondrona #sexworkers (mpivaro-tena)  Kandapara: «Olona miaraka amin'ny kibay, nilaza taminay izy ireo fa manana adiny iray izahay hialàna raha tsy izany hodoran'izy ireo amin'ny lasantsy ny trano.
Mogoje Curfew  (tsy mahazo mivoaka ao amin'ny atidoha) nanoratra tao amin'ny bilaogy ​​Sovyata (Sivilizationa) fa tsy araka ny sitrapony no nanaovan'ireo mpivaro-tena ny asany, fa noho ny hasarotam-piainana na faneriterena. Nanoratra izay mety hitranga amin'ireo mpivaro-tena ireo ihany koa ity bilaogera ity raha tsy misy ny famerenana ny zon'izy ireo:
Tsy ity no tranon'ny mpivaro-tena voalohany nakatona sy mpivaro-tena ao aminy voaroaka ao amin'ny firenena maro an'isa Miozolomana, izay tsy mitsaha-mitombo ny kaonservatisma (fandalana ny nentim-paharazana). Tamin'ny 23 Jolay 1999, nakatona  ny tranon'ny mpivaro-tena tao Tanbazar, iray amin'ireo taloha indrindra sy lehibe indrindra ka mpivaro-tena teo amin'ny 2.600 teo no voaraoka tao an-tranony. Ny Kandupatti  ao Dhaka, tranon'ireo mpivaro-tena an'arivony maromaro no nakatona manaraka. Ary avy eo tao Magura . Tamin'ny volana Aogositra tamin'ny taon-dasa, voatafika ny tao amin'ny tranon'ny mpivaro-tena ao Madaripur ka mpivaro-tena teo amin'ny 500 teo no simba fananana sy voaroba.
Ny zavatra ankapobeny fantatra dia ny fanerena ara-pivavahana sy ara-piarahamonina no ambadiky ny fandroahana tao Tangails Kandapara. Na dia izany aza, nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanoratra gazety  tamin'ny 17 Jolay 2014, nilaza ny Tambajotran'ny Mpivaro-tena, ny fikambanana nasionalin'ny mpivaro-tena ao Bangladesh fa araraotin'ny ben'ny tanàna ny fihevitra ara-pivavahana mba hakàna an-keriny tany iray hekitara sy tapany amin'ny faritra iasana sy onenan'ny mpivarotena ao Kandapara.
Iray amin'ireo firenena vitsy amin'ny firenena maro Miozolomana an'isa tsy mandrara amin'ny fomba ofisialy ny fivarota-tena i Bangladesh. Azo jerena tamin'ny tantara Bengal fahagola ny fivarotan-tena, saingy tsy mba nahazo fankatoavana eo amin'ny sehatry ny lalàna mihitsy ity asa ity, na dia nandritra ny vanim-potoanan'ny fanjanahan-tany Britanika  aza. Tamin'ny taona 2000 , nankatoavin'ny fitsarana tao an-toerana tamin'ny alalan'ny didim-pitsarana ny asa fivarotan-tena.
Ao Bangladesh, tranona mpivaro-tena 18 sy mpivaro-tena eo amin'ny 200 000 eo no voasoratra anarana manerana ny firenena. Nanambara ny fikarohana vao haingana  fa mananika tsimoramora ihany koa ny fivarotan-tenan'ny ankizy.
Kazi Mamun Hossain , bilaogera Bangladeshita am-pielezana nanoratra tao amin'ny sehatra fibilaogina amin'ny teny Bangla, Somewhereinblog:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/07/31/62571/
 Nakatona : http://www.hurriyetdailynews.com/bangladeshs-oldest-brothel-closed-after-islamist-pressure.aspx?pageID=238&nID=69095&NewsCatID=356
 Niroborobo nanomboka ny 1860 hatramin'ny 1880 : http://archive.thedailystar.net/forum/2010/july/quarter.htm
 voatafika : http://www.dhakatribune.com/crime/2013/aug/28/madaripur-brothel-vandalised-looted#sthash.QoqUXNJP.qpojAqkt.dpuf
 nandritra ny valan-dresaka hoan'ny mpanoratra gazety: http://www.swnob.com/
 vanim-potoanan'ny fanjanahan-tany Britanika: http://jalchhabibatayan.com/archives/5995
 tranona mpivaro-tena 18 sy mpivaro-tena eo amin'ny 200 000 eo no voasoratra anarana : http://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Bangladesh
 fikarohana vao haingana: http://atikullah.blogspot.com/2012/02/people-of-brothel.html